Tababare Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay In Kooxdiisa Barcelona Ay Ku Soo Aaday Chelsea Wareega 16ka Ee Champions League - Laacib.net
Tababare Ernesto Valverde Oo Ka Hadlay In Kooxdiisa Barcelona Ay Ku Soo Aaday Chelsea Wareega 16ka Ee Champions League
Tababaraha kooxds Barcelona Ernesto Valverde ayaa kala hadlay Barca TV isku aadka wareega 16ka Champions League iyadoo kooxda Catalan ay isku soo aadeen kooxda Antonio Conte ee Chelsea.
Macalinka Barcelona ayaa sheegay in kooxda Premier League ka dhisan inay tahay koox adag, laakiin waxa uu sheegay inay taasi la micno tahay inaysan u baahneyn dhiirogelin dheeri ah labada lug ee wareega 16ka Champions League.
“Waa isku aad adag sababtoo ah sida ay u weyn tahay kooxda inaga soo horjeeda” ayuu yiri Valverde. “Laakiin waan ogeyn inaysan noqon doonin wax sahlan sababtoo ah kooxo fiican ayaa ku jiray isku aadka.
“Chelsea waa kooxda heysata horyaalka Premier League laakiin waxaan ku faraxsanahay kulamada wareega inkastoo ay adkaan doonto. Waa kulan weyn oo inoo fiican sidoo kalena u fiican taageerayaasha. Waa ay sahlanaan doontaa inaan dhiirogelin u helno kulamadaan.”
Isagoo ka hadlayay kooxda Conte waxa uu hadalkiisa raaciyay: “Chelsea waa koox xoogan, waa koox xoog ku dhisan islamarkaana leh nidaam ciyaareed oo cad. Si fiican ayay uga faa’ideystaan kubada xooga ku dhisan ee Premier League, waxaana ay weerarkooda ku soo kordhiyeen Alvaro Morata, halka Eden Hazrad uu aad ugu fiican yahay inuu daafacyada ka dhex baxo.”
Lugta hore waxaa Stamford Bridge lagu dheeli doonaa 20ka bisha Febraayo iyadoo lugta labaad oo ka dhaceysa Camp Nou la ciyaari doono 14ka bisha March.
8 Fekradood ayaa laga dhiibtay ilaa iyo haatan. Ku soo biir dood wadaaga.
HAMZE NEYMAR 12-12-2017 at 3:35 pm -
Forza barca guuul
abdirashiid honest 12-12-2017 at 10:28 am -
Waaw wan kaxumahy inaan ku aadno barcelona sabab too ah mazahlana ciyaarta waa kulan weyn
chelsea kuul ayaaa urajynaaa
dr. carab axmed xasan 11-12-2017 at 11:18 pm -
waxa xaqiiq ah in chelka lagu tumanayo wayo 7difac ah iyo libaxa red Argentina kkk
Baba 11-12-2017 at 10:23 pm -
barcelona wxay ahato chalsea wa barantahy lawada gurina walugu garaca barcelona insha allah
abdikarim osman 11-12-2017 at 9:14 pm -
aggregate chelsea 3 barce2
ibrahim apdirahman 11-12-2017 at 8:15 pm -
barcelona vs chealsea .barcelona guul insha allah 2and 0
mahamad mahamud wairah 11-12-2017 at 8:01 pm -
masha Allah aniga fikirmayga am a aragtida barco waa koox tarikhkuleh koopkan lkn ciyaar ayay haysaa lkn barco khibrad ayaakujirta kulan koobad 1 chelse 1 . 0 barco kulanka 2 barco 3 . 0chese
salmaan xasan maxamed 11-12-2017 at 7:47 pm -
barcelona runtii waax koox adag laakiin wax walbo iney ugu wanaagsantahay dhigooda chelsea saas ma ahan war hooy barceloonay isdaji